Otomatiki ekumisikidza muchina Vatengesi uye fekitori - China otomatiki ekunyora muchina Vagadziri
Otomatiki Bottle Kunyora Machine
SHL-1520 otomatiki Vertical Kunyora Mashini 1. Chigadzirwa mufananidzo 2.Equipment Zvimiro 1. Ichi chishandiso chinoshandiswa kutwasuka kunyorwa kwemabhodhoro akapotera kana zvinhu zve cylindrical. 2. Powered synchronous tension control control labels, kugadzikana uye nekukurumidza kupa, kuve nekumhanyisa uye kururamisa kwekudyara kwemazita. 3. Bhodhoro rinoparadzanisa mashandiro rinoshandisa rinowirirana chipanji vhiri kune isina nhanho kumhanya mirau, uye bhodhoro rinoparadzanisa chinhambwe rinogona kumisikidzwa zvisina tsarukano. 4. Muchina uyu unoshandisa advanced touch-t ...
Shl-1582 Horizontal Kunyora Muchina
SHL-1582 Horizental Labeling Machine 1. Chigadzirwa chemufananidzo 2.Equipment Zvimiro 1. Ultra yekupfeka-inodzivirira chitenderedzwa rolling mashandiro, kushandiswa kwakasarudzika kwe polyurethane zvinhu, zvinogara uye kusapfeka-kusagadzikana. 2. Yepamberi plamu vhiri yekudyisa michina, yakapusa, yakagadzikana, yakavimbika uye isina-kusimba 3.Zvekunze mabheyaringi anoshandiswa kuisa anotakura anotenderera kuita kuti zvinhu zvisvike pakuumburudza kuverengera yekunyorera mhando. 4. Yakagadzikana uye inogara yakasimba muchina chigadziko uye dzakasiyana zvikamu zvese zviri kutora zvakaenzana mo ...
Shl-2510 otomatiki Akaviri Mativi Kunyora Muchina
SHL-2510 otomatiki Akapetwa mativi Ekunyora Machine 1. Chigadzirwa mufananidzo 2.Equipment Zvimiro 1. Iyi michina inogona kuiswa kune rimwe divi kana maviri mativi (mapfupi mavara) emabhodhoro akatenderera, rimwe divi kana maviri mativi emabhodhoro akaenzana, rimwe divi kana maviri mativi emabhodhoro akapfava (senge sipo, geji yekugezesa, mafuta anodyiwa, girizi, kuwacha Detergents, madonhwe eziso, nezvimwewo. Iyo ine akasiyana siyana ekushandisa uye yakasimba kuchinjika. 2. Powered inowirirana kunetsekana kudzora kupa zvinyorwa, kugadzikana uye nekukurumidza kupa, kuona ...
Shl-1520 otomatiki Mineral Mvura Bhodhoro / Girazi Bhodhoro / Plastiki Bhodhoro Kunyora Muchina
SHL-1520 otomatiki Vertical Kunyora Mashini 1. Chigadzirwa mufananidzo 2.Equipment Zvimiro 1. Ichi chishandiso chinoshandiswa kutwasuka kunyorwa kwemabhodhoro akapotera kana zvinhu zve cylindrical. 2. Powered synchronous tension control control labels, kugadzikana uye nekukurumidza kupa, kuve nekumhanyisa uye kururamisa kwekudyara kwemazita. 3. Bhodhoro rinoparadzanisa mashandiro rinoshandisa rinowirirana chipanji vhiri kune isina nhanho kumhanya mirau, uye bhodhoro rinoparadzanisa chinhambwe rinogona kumisikidzwa zvisina tsarukano. 4. Muchina uyu unoshandisa advanced t ...
DHL-1520 otomatiki yekunamatira Kunyora Mashini
Shl-1520 otomatiki Mvura Bhodhoro / Muto Inonwa Bhodhoro / Pet Bhodhoro Kunyora Muchina
Shl-1520 Pharmaceutical otomatiki Round Bhodhoro Plane Labeler
SHL-1520 otomatiki Vertical Kunyora Mashini 1. Chigadzirwa mufananidzo 2.Equipment Maficha1. Ichi chishandiso chinoshandiswa kutwasuka kunyorwa kwemabhodhoro akatenderera kana zvinhu zve cylindrical. 2. Powered synchronous tension control control labels, kugadzikana uye nekukurumidza kupa, kuve nekumhanyisa uye kururamisa kwekudyara kwemazita. Bhodhoro rinoparadzanisa mashandiro rinoshandisa rinowirirana chipanji vhiri kune isina nhanho kumhanya mirau, uye bhodhoro rinoparadzanisa chinhambwe rinogona kumisikidzwa arbitraril ...
Shl-3520 Diagonal Kunyora Muchina
SHL-3520 Diagonal Kunyora Mashini 1. Chigadzirwa mufananidzo 2.Equipment Zvimiro1. Imwe chete uye diagonal zvinyorwa zvemabhati akapetana uye akaenzana ezvinyorwa zvakasiyana zvinogona kuiswa (kumutsetse wekubatanidza wekatoni) ine kudyisa kwakatsiga uye yakakura buffer nzvimbo. 2. Synchronous cheni proofing michina yekuona yakatsetseka uye ichokwadi kuverenga kuverenga. 3, sikuru yekuveza chimiro chekutonga, kunyora kwakaringana. Yakakura yekugadzirisa renji. Unogona kujairana nemabhokisi akasiyana siyana ....
Shl-1530 Ndege Yekunyorera Machine
SHL-1530 otomatiki Plane Kunyora Mashini 1. Chigadzirwa mufananidzo 2.Equipment Zvimiro 1. Yakatsaurirwa kune yakadzika kunyora yezvakawanda zvakatemwa. 2. Muchina uyu unoshandisa advanced touch-type yemunhu-muchina interface, inonzwisisika chimiro uye inoshanda mashandiro. 3. Powered synchronous tension control control labels, kugadzikana uye nekukurumidza kupa, kuve nekumhanyisa uye kururamisa kwekudyara kwemazita. 4. Vhiri rechipanji rinongotenderedza zita racho kuti risimbise. 5. Muchina uyu unoshandisa SUS304 stainle ...
Shl-1520 otomatiki Sticker Kunyora Muchina